Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Barbados News Breaking » Duulimaadyada cusub ee KLM ee Amsterdam ilaa Barbados
Airlines • Airport • Aviation • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada cusub ee KLM ee Amsterdam ilaa Barbados.
KLM Royal Dutch Airlines waxay ahayd diyaaraddii ugu horraysay ee ganacsi oo timaadda Seawell Airport ee Barbados Oktoobar 19, 1938.
Duulimaadkii ugu horreeyay ee KLM Royal Dutch Airlines, oo loo qorsheeyay Oktoobar 16, 2021 ayaa durba la iibiyay.
Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka Caalamiga ah, Senator Mudane. Lisa Cummins ayaa ku tilmaamtay adeegga cusub ee KLM inuu yahay horumar weyn oo loogu talagalay dalxiiska Barbados.
Adeegga cusub ee KLM wuxuu bixin doonaa helitaan ballaaran iyo isku xirnaan aan kala go 'lahayn oo ka timaada waddamada iyo gobollada waaweyn ee Yurub sida Netherlands, Belgium, France iyo Scandinavia, iyada oo loo sii marinayo Madaarka Amsterdam Schiphol ee Nederland.
Albaab cusub oo reer Yurub ah ayaa durba muujinaya ballan qaadka Barbados iyadoo Madaarka Caalamiga ah ee Grantley Adams (BGI) uu isku diyaarinayo inuu adeeg cusub oo toos ah ka helo Madaarka Amsterdam Schiphol (AMS) isagoo adeegsanaya KLM Royal Dutch Airlines.
Bilo kadib markii lagu dhawaaqay adeegga cusub, duullimaadkii ugu horreeyay, oo loo qorsheeyay Oktoobar 16, 2021 ayaa durba la iibiyay. Marka lagu daro jawaabta gaarka ah, waxay u noqon doontaa dalka taariikh taariikhi ah sida KLM Royal Dutch Airliness waxay ahayd diyaaraddii ugu horraysay ee ganacsi oo timaadda Seawell Airport ee Barbados Oktoobar 19, 1938. Hadda, 83 sano ka dib, waxay mar kale samaynaysaa taariikh iyada oo duulimaad laga iibiyey Amsterdam ilaa Barbados.
Wasiirka Dalxiiska iyo Gaadiidka Caalamiga ah, Senator Mudane. Lisa Cummins ayaa ku tilmaamtay inay tahay mid kor u qaadaysa dalxiiska dalka. “Waxaan rajeyneynaa inaan mar kale ku soo dhaweyno KLM, labaatan sano kadib, xeebaheena. Markaan eegno xaaladda warshadaha dalxiiska ee caalamiga ah, xaqiiqda ah in inta lagu guda jiro masiibadan, shuraakadayada ayaa sii wada inay muujiyaan kalsoonida noocaas ah Barbados sumadda, leh KLM ku -dhawaad ​​20,000 oo kursi oo ka socda Yurub ilaa Barbados muddo shan bilood ah, waa wax lagu farxo. Waxaa ka sii muhiimsan, waxay ka tarjumaysaa shaqada ay kooxda dalxiiska ee u adeegaysa Barbados qabanayaan annaga oo tilmaamaynayna xiritaanka heshiisyo badan oo loogu talagalay hawo -qaadista cusub oo la ballaariyay oo aan sii wadno inaan dib noogu soo celino waaxdeenna duruufahaas aan caadiga ahayn. ”
"Marka waxaan rabaa inaan bogaadiyo dadaallada kooxda oo dhan, gaar ahaan kooxdeena gurigeenna ku leh Wasaaradda, GAIA, iyo suuqyadeena dibedda ee kiiskan, gaar ahaan kooxda Yurub, oo si hagar la'aan ah uga shaqeeyay inay tan run noqoto," Ayay tiri.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ugu dheer adduunka, oo ku shaqaynaya magaceeda asalka ah 100 sano, KLM waa kan ugu weyn ee qaada muddada dheer ee Yurub, isagoo u adeega 318 meelood oo ku yaal 118 dal oo leh 80 wada-hawlgalayaal wadaag code. Adeegga cusub ee KLM wuxuu bixin doonaa helitaan ballaaran iyo isku xirnaan aan kala go 'lahayn oo ka timaada iyo ka yimaada waddamada iyo gobollada waaweyn ee Yurub sida Netherlands, Belgium, France iyo Scandinavia, iyada oo loo sii mari doono Madaarka Amsterdam Schiphol ee Nederland.
Cummins wuxuu raaciyay “Horumarkaani wuxuu si wanaagsan u wanaajin doonaa dadaallada Barbados ee dib-u-dhiska raadkiisa Yurub waxaan aad ugu faraxsanahay in Barbados uu ku faani karo iskaashi xoog leh labada KLM iyo Lufthansa, oo ah laba xamuul oo reer Yurub ah, markaan ku soo dhowaanno jiilaalka 2021/2022. Waxaa naga go'an inaan sii wadno riixitaankaan inta ka dhiman xilli ciyaareedka.
"Dabcan, waxaan sidoo kale filaynaa in dad badan oo u dhashay Barbadiyiinta iyo Kariibiyaanka ay jeclaan lahaayeen inay ka faa'ideystaan ​​isku xirnaanta hufan ee Yurub ee Barbados waxaanan rajeyneynaa in baahi xoog leh, shirkadaha duullimaadku ay ka fiirsan doonaan kordhinta xilliga," ayay tiri. Waxa aan sidoo kale kala shaqeyneyno la -hawlgalayaasheena ayaa ah isu -dheellitirka riixitaanka dalxiiska ee rakaabka iyo ajandahayaga ganacsiga si loo bixiyo shixnadaha xamuulka ee badeecadaha gaar ahaan waxyaabaha burburaya. Tani waxay muhiim u tahay qayb ka mid ah faylalkayaga gaadiidka caalamiga ah oo fure u ah ballaarinta dhaqaalaheena ee suuqyada cusub iyadoo la adeegsanayo cilaaqaadyada hawada.
Duulimaadyadu waxay u shaqayn doonaan si aan joogsi lahayn Amsterdam ilaa Barbados, saddex maalmood toddobaadkii Isniinta, Khamiista iyo Sabtida markabka KLM ee casriga ah, ee hufan ee Airbus A330-200 oo leh 264 kursi saddex fasal oo ay ku jirto ganacsi. Ka tagaya Amsterdam markay tahay 12:25 pm CET oo imaanaysa BGI 4:45 pm AST, adeeggu wuxuu socon doonaa ilaa Maarso 31st, 2022.